USB Stick ပြသနာအားရှင်းကြည့်ခြင်း။ " ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » ကွန်ပျူတာနည်းလမ်းများ » USB Stick ပြသနာအားရှင်းကြည့်ခြင်း။ "
USB Stick ပြသနာအားရှင်းကြည့်ခြင်း။ "
Thursday, June 12, 2014 ကွန်ပျူတာနည်းလမ်းများ
USB Memory Stick နဲ့ ပတ်သက်လို့Barcamp yangon ( MMIT Development ) တွေ့ ဆုံပွဲ မှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြတာလေး
အတွက် Data ပါမသွားတဲ့အတွက်အခုမှတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Pendrive (stick) တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖြစ်များတဲ့ပြသနာလေးတွေ ( format ရိုက်မရတာ။ အထဲမှာတစ်ကောင်ကောင်ရှိလို့ ဘာမှလုပ်မရတော့တာ။ read /write မရတော့တာတွေ ) အတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် detected သိတဲ့ Pendrive အတွက်ဘဲအကျုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ က Hardware ပြသနာတွေကြောင့် detected
တောင်မရတော့ပါ။ တစ်ချို့ stick တွေဟာဆိုရင် ရှော့ဖြစ်ပြီးတော့ Mortherboard ကိုထိသွားလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ကြုံဖူးပါတယ်။
Warranty ရှိသေးတော့ ပြန်လဲပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ရတယ်ဗျာ။ အဲလိုပေါ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့ stick တွေကအမျိုးမျိုး
ရှိတော့ Quality ကလည်း ဂလိုဘဲပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ပါပြီပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ ဘယ်တွေရောက်သွားပြိလဲမသိဘူး။
Tools လေးနှစ်ခုပေးမယ်ဗျာ။ ပထမတစ်ခုကတော့ Usb production Tool ဒုတိယတစ်ခုကတော့ LIF tool။
1.ပထမတစ်ခုကတော့ Usb Production Tool လေးပါ။ sitck တော်တော်များများအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။
Detected မသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ လက်လျော့လိုက်ပါတော့။ Detected ရတဲ့ Stick ဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံကတော့လွယ်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုဖြေလိုက်ပြီးတော့ Pdx 16.exe ဆိုတာလေးကို run လိုက်ဗျာ။ အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ( Window7နဲ့ တော့သိပ်အဆင်မပြေပါ ) XP ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
တကယ်လို့ Error တက်နေတဲ့ Stick ကိုသူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် Device နေရာမှာသိပြီးတော့ မြှားကလေးလင်းလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆိုရင် မြှားကလေးကိုနှိတ်လိုက်တာနဲ့ ( စက်ဝိုင်းလေးလည်းပေါ်တတ်တယ်။ ) သူ့ ဖာသာသူ Remade ပြန်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ မကျေနပ်သေးရင်တော့ ပုံမှန် Formet တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ သူကယ်လို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး အပေါ်ကပုံအတိုင်းသာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အော် ပြောဖို့ တစ်ခုမေ့ကျန်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။ Memory stick ( pen drive) ကိုအ၇င်တတ်ပြိးမှ software လေးကို run ပါ ။ ဒါဆိုပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
2. နောက်တစ်ခုကတော့ LIf tool ( low level formet tool ) ပါ။ ကြိုပြီးတော့သတိပေးပါတယ် တစ်ချက်မှားသွားတာနဲ့ သင့် Data
တွေအတွက် sorry ပါလို့ ဘဲပြောပါရေစေ။ ( ဖြီးတာမဟုတ်ပါ ဟဲ. ဟဲ )။
အဲဒါလေးကိုဖြေပြီးတော့ run လိုက်ရင် ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်ပုံမှာပေါ်နေတာက ATA harddisk ပါ ။ USB တပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Usbinterface နဲ့ ပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒီမှာကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ USB ကိုသေချာလေးရွေးပြီးမှ Continue လေးလုပ်သွားရုံပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးလုပ်ပြီးသွားရင်တော့
ပုံမှန် formet လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ။ မှားပြီးတော့ ATA့ harddisk ကိုသွားမထိလိုက်ပါနဲ့။ Data တွေပလုံသွား
Read more: http://sitnaingaung.webnode.com/usb/
Zaypa Last Virsion (2.5)
World Cup Brazil 2014 PRO v1.8.1
Facebook Color Emotion UI Theme
Root Apk များ စုစည်းမှု (No PC)
ံHuawei ဖုန်းတွေအတွက်Secret Codeများ
Viber. Skype.Tango.Phone ရဲ့အသံဖမ်းပေးမဲ့Steady Ca...
WiFi Password Recovery_1.1.apk
Power Schedular For Android
☺☺☺☺☺ Mobile Care ☻☻☻☻☻
ံHuawei Version 4.2.1ကိုGoogle Play Storeသွင်းနည်း...
ငရဲကြီး ၈ ထပ် နှင့် ၃၁ ဘုံ APK
ဖုန်းအတွက် မြန်မာဖောင့် အလန်းလေးများ
Universal Document Covertor
Fox sport .apk
နည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (100)ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဆိုဒ်
Cymera (last Virsion)
**** Combat Soldier2****
+++ Angry Cats ++++
All Call Online.apk
Android ဖုန်းမှာIphone Style Folderထားချင်သူများအတ...
Best wallpaper HD.apk
မည်သည့် window login passwords ကိုမဆိုကျော်ဖြတ်နည်...
Y320 Network Error ဖြေရှင်းနည်း
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းပြ apk
Youtube( Offical) Last Update
≈ ≈ ≈ Wi-Fi Talki (around 30) ≈ ≈ ≈
^^^^^^^^^^ Ski Safari ^^^^^^^^^^^^^^^^^
~~~~~ Prison Break ~~~~~~~
<<<<<< Chess >>>>>
≈ Avator ≈
Pretty Asian Girl Live Wallpapers
Android သမားများအကြိုက်တွေ့မယ့် အထူးလုံခြုံရေး apk...
ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ နိုတီဘားပရို မြန်မာမှု.apk
Dropbox (last update)
Huawei c8816 နဲ. c8816d ရဲ. system partitions တွေအ...
Desktop တစ်လုံးမှာဘာတွ မကောင်းသလည်းကိုယ်တိုင်စမ်းမ...
USB drive တွေ ကွန်ပြုတာမှာ မပေါ်ရင်
USB Device တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်တစ်မျိ...
USB Drives တွေမှတဆင့် Autorun ကနေ ဝင်လာမယ့် Viruse...
USB Drive ဖွင့်မရခြင်း ( သို့ ) Open with ဖြင့် တက...
သင့်ကွန်ပျုတာမှာ USB Drive တပ်လိုက်ပြီး မပေါ်ခြင်း
USB Memory Stick ကိုဘယ်လို Format ချမလဲ ?
USB Memory Stick ကို Format ချမရရင်
How to Fix "USB Drive Not Recognized" (USB ပြဿနာ)
This Connection is Untrusted '' Error ဖြေရှင်းနည်း...
မြန်မာ Programmer တစ်ဦးရေးသားတဲ့ MSE Offline Upda...
U8825D CWM English Version နဲ. CWM သွင်းနည်း
Galaxy S4 Rom For Huawei Devices
G-730 U00 & C00 တွေမြန်မာစာ
"Huawei G610-U00 အတွက် CWM Recovery(English) နှင့်...
Huawei G730-C00 ကို network unlock နဲ့ Font ထည့်လု...
Y535-C00 version 4.3 ကို Root လုပ်စရာမလိုပဲ myanma...
Huawei G730-U00 CWM Recovery (English) +SP Flash T...
SMS Collections (30000+)
Blogway.apk For Blogger
Sweet Love Rinetones.apk